Video ku biirto: Sida loo midowdo Videos fudud oo dhakhso ah
> Resource > Video > Sidee inay la midowdo Videos fudud oo dhakhso ah
Ma doonaysaa in ay ku milmaan aad video files aan nabaad mid ka mid ah oo tayo leh? Haddii ay haa tahay, aad u yimaadeen inay meel sax ah. Laga guurayo file Video waxaa la samayn karaa si fudud oo dhaqso leh u horyalka Talyaaniga iyo adag video biirto: Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Barnaamijkan waxa uu waafaqsan sare iyada oo ku dhowaad dhammaan qaabab warbaahinta oo ay ku jirto AVI, MPEG-4, MPEG 1/2, MOV, FLV, 3GP, VOB, MTS, M2TS, DivX, XviD, wmv, MKV, M4V, MP3, WMA, regelingen, AAC, AC3, AIFF, TRP, TP, mod, TOD, iwm dib markii biirtay galay mid ka mid file weyn, waxaad ciyaari kartaa videos camera shot, barnaamijyada TV duubay, soo bixi YouTube videos, ama soo bandhigga video / files audio oo aan la dhexgelin wax . Hadda aynu ku dhex socdo hoos ku faahfaahsan hage.
Download Free version Imtixaamana Video midowgii:
Fiiro gaar ah : Video ku biirto ayaa laba qeybood oo la heli karo: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) u Windows iyo Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) . Labadan versions wadaagaan feature la mid ah oo hoos ku hage qaadataa Screenshot version Windows. Kaliya u hubso in aad kala soo bixi version saxda ah.
1 dejinta aad video files
Video ku biirto bixisaa User ah ee Album in aad ku darto video, audio ama sawiro. Guji "Import" in lagu daro aad video files ama si toos ah kuwaa oo si heestii. Ka dib marka aad soo dhoofsadaan oo dhan oo iyaga ka mid ah, waxay muujiyaan doonaa sida thumbnails uu furmo suuqa ka tagay. Fiiro gaar ah: Haddii aad qabtid dhibaato si ay u gudbiyaan aad videos fiidiyo duubay, fadlan eeg Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka fiidiyo ugu Computer .
2 midowdo video by jiitaa-n-dhibic
Hadda si fudud u jiidi oo hoos u faylasha aad rabto in aad isku biiraan si ay column video ah, ka dibna waxaad ka heli doontaa video mideeyey muuqan. Pretty qabow, sax? Taasi waa run, waxaad riixi kartaa "Play" badhanka si aad u hubiso shaashadda midig.
Waxaad mid ka jeclaan fiican files MOV jiita ka mid si files MOV, kuwaas oo loo qoondeeyey waxa sida ay si play ah.
Ha jiidi mid file in file kale, ama waxaad ka dillaacisay doonaa dambe. Haddii loo baahdo, waxaad dhaqaajin karin bar slider ay ku darto files MOV in Timeline ka fiican.
3 goo, ku dar kala guurka (optional)
Waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale ka fekeraan biirtay qaybaha kaliya ee aad video clips, iyo ku daro saameynta kala guurka si aad videos dheeraad ah oo gaar ah iyo iminka. Waxaa ma noqon karaan kuwo sahlan arrintan Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) .
Si aad u jar aad videos, fadlan riix video clip iyo markii ay muujinaysaa "I" icon, guuraan waxaa ka tagay ama xaq u leedahay in laga takhaluso aad qayb aan la rabin.
Si aad ku dari kala guurka, kaliya ku dhacay "guurka" tab kor ku Timeline, oo jiidi aad saamayn guurka jecel dhexeeya laba clips. Sidoo kale, waxaad xaq u riixi kartaa guurka kasta si "waxay khuseeyaan dhammaan".
Intaa waxaa dheer, Video midoobeen noola, isku shaandheyn, kala qaybsan tahay qaabab warbaahinta, ku dar subtitles, dalban saamaynta miirayaasha. Wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan eeg Hagaha Filmora ee .
4 dhoofinta aad file weyn mideeyey
Marka dhan beddelka ku qancay, kaliya ku dhacay "Abuur" tab inay u dhoofiyaan aad videos hadda. Waxaad dhoofin karaan qaabab video asalka ah ama si toos ah loogu badalo qalabka aad la qaadi karo sida iPhone, iPad, HTC, Samsung Galaxy, iwm ay ka ciyaari doonaan kaamil ah oo ku saabsan qalabka aad.
Haddii kale, waxaad la wadaagi kartaa abuurkiinna si YouTube si toos ah uga software this, ama u gubato si DVD ilaalinta fiican. Just tagaan, waayo, ka dibna riix "Abuur" dhammayn dhoofinta ah.
Fiiri tutorial video ku saabsan sida loo midowdo videos muuqan ah oo hufan si ay.
Download Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor):
Sida loo Beddelaan mod in AVI